Amabhaso "Oscar of infasilmente" aya kuba eSingapore - Geofumadas
Ibhaso le "Oscar of Infrastructure" liya kuba seSingapore
Matshi, 2017 ezintsha, Microstation-Bentley
I-Bentley Systems iye yazisa isimemo sokungeniswa kweeprojekthi zeeMbali Uphefumulelwe 2017 ukuya Uphuhliso lwe-BIM kwiZibonelelo.
Ngokujoliswe ekuqhubekeni kwimiqathango yeBIM, i-Bentley Systems inqwenela ukubeka ifowuni yayo kwiminyaka ezayo eMpuma Ekude; ngokuchanekileyo kulo nyaka kwiyodwa yezixeko ezinomlinganiselo oza kusondeza kwisiqhelo se-smart city (#smartcity).
I-Bentley Systems, inkampani igxile ekunikezeni izicwangciso ze-software eziqingqiweyo uphuhliso lweziseko. Los Iphefumlelwe i-2017 Awards zinikezelwa yijaji ezizimeleyo ezenziwe ngeengcali ezivela kwicandelo, ziyaqaphela iiprojekthi zeziseko ngokuhambela kwe-BIM ekuphuculeni ukuphunyezwa kweeprojekthi kunye / okanye ukusebenza kweempahla. Umhla wokugqibela wokuhambisa iiprojekthi yi-1 kaMeyi we-2017.
Amabhaso Uphefumulelwe ziyinxalenye ebalulekileyo Nkomfa Unyaka kwiZiseko 2017 I-Bentley, eya kuqhutywa kwi-10, i-11 kunye ne-12 iintsuku ngo-Okthobha eSingapore, kwiSesh Convention kunye neMiboniso ye-Exhibition Centre eMark Bay Sands, enye yezona zakhiwo ezibonakalayo e-Asia. Isakhiwo sakhiwo seMarine Bay Sands sanikezwa yi-Arup kwaye sasinomdla weNkokhelo Uphefumulelwe I-2010 ye-Innovation kwiNjineli yobunjineli.
Bonke abasebenzisi beBentley bangabonisa iiprojekthi zabo kwi-Awards program Uphefumulelwe, kungakhathaliseki ukuba isigaba apho iprojekthi yile: ukulungiswa kwangaphambili / ingcamango, ukuyila, ukwakhiwa okanye ukusebenza. Aba bathathu abagqibeleleyo abaphethiweyo kwiqela ngalinye leeMali Uphefumulelwe Baya kuzuza uhambo oluya eSingapore ukuya kwenkomfa, njengeendwendwe zeBentley Systems. Abagqityiweyo baya kufaka iiprojekthi zabo kwisigaba sokugqibela seNkomfa yeAmpesenti Uphefumulelwe phambi kokuba abagwebi, iinkokeli zembono zoshishino kunye nabangaphezu kwe-100 amalungu eendaba.
Amabhaso Uphefumulelwe Bayayamkela inkqubela ye-BIM kwezi ndidi zilandelayo ze-17, ezininzi zazo zizintsha kulo nyaka, phakathi kwazo endikuqwalasele "kukuSebenza kukaMasipala" kunye "nobunjineli bendalo":
Amandla kunye nokucwangcisa izityalo
Izithuthi kunye nokuhamba
Ukusebenza kwempahla yoshishino kunye neenkonzo zoluntu
Ukuthunyelwa nokuhanjiswa kweenkonzo zoluntu
Izityalo zamanzi kunye namanzi angcolileyo
Inkomfa iya kubandakanya iiforam ezintsha zoshishino, kuquka:
Iindlela kunye namabridri
Iinkonzo zikaRhulumente kunye namanzi
URichard Ruth, intloko yemveliso kunye neenkonzo, uDanfoss, wathi: "Inkampani yethu yayinegunya lokubongwa kwiAgadi Uphefumulelwe I-2016 ngokutsha kwamashishini kunye nokuphathwa kwamandla. Bobabini inkomfa kunye namabhaso asinika ithuba elihle lokuhlangabezana neeprojekthi zobuchwepheshe kunye nobuchule obuvela kwihlabathi lonke, kwaye ndifuna ukugqamisa iimeko zokunxibelelana enikezelwa yinkomfa. Enye into esiyifumene kakhulu kukuba iprojekthi yethu yavanywa kwaye yafaniswa namanye asebenza nabo kunye nabakhuphiswano kwishishini. Sithemba ukubonisa iiprojekthi eziliqela kwiiMali Uphefumulelwe 2017 kwaye baye kwiinkomfa eSingapore! ".
UPaul Baron, umlawuli weqela loshishino ePacific, i-GHD, wathi: "Ngaphambi kokuba ndihambe kwinqanaba ndiziva ngathi ndingumqoqo. Inyaniso elula yokuthatha inxaxheba kwisiganeko kunye nokuzungezwa ngabaviwa abaninzi beeprojekthi ezivelele kakhulu. Siyaziqhenya kakhulu kukuba iphrojekthi yethu yokukhuthaza ukulawulwa kwakhiwo yayiphakathi kwabatyunjwe ama-Award Uphefumulelwe 2016. Siyayixabisa nomdla oboniswe ngamajelo ehlabathini lonke ngethuba lethu kunye nokusetyenziswa kwethu okutsha kwethekhnoloji. Ukuba iprojekthi yethu yaqatshelwa kwimeko yehlabathi phambi koontanga bethu, iinkokheli zoshishino kunye namalungu abeendaba kwakuyisifundo sokuthobeka. Sithemba ukuvelisa iiprojekthi ezintsha kulo nyaka. "
Bonke abaviwa beeMbali Uphefumulelwe Bafumana ukubaluleka okubalulekileyo nokuxabisekileyo kwiindawo zoluntu lwezibonelelo ngezizwe ngezizwe. NgeeNkcazo Uphefumulelwe, abathathi-nxaxheba banga:
fumana ukuqonda kwamanye amazwe Xa ubonisa iiprojekthi zakho zophuhliso kwiBentley Yearbook: Yonyaka Yonyaka, esasazwa kwifomathi eshicilelweyo kunye neyedijithali kumajelo abalulekileyo e-150.000, oorhulumente kunye nobuntu obuqilileyo kumashishini ngamazwe; Ngakolunye uhlangothi, bonke abaphumeleleyo, abagqibeleleyo kunye nezinye iiprojekthi ezikhethiweyo ziya kufakwa kwi webhsayithi Iiprofayili zeprojekti yomsebenzisi weBentley;
meleza lwakho inzuzo yokukhuphisana ngokubonisa abaxhasi, abakhona kunye nabangenako, ukubaluleka kweenkampani zabo ezichaphazelayo kwiiprojekthi ngenxa yentuthuko entsha ye-BIM;
fumana inkxaso eninzi yolwazi lwamazwe ngamazwe kunye nenkxaso yeqela leBentley lokuthengisa nokukhuthazwa kweeprojekthi zazo.
Ukufumana ulwazi oluninzi malunga neeprogram zeAward Uphefumulelwe okanye ukugqiba ifom yesicelo, tyelela www.bentley.com/BeInspired.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukumiselwa kwamalungelo kwi-Registry-Cadastre iinkonzo kwicandelo likarhulumente
Post Next System yekhamera isicelo-StreetviewOkulandelayo "